Yunivarsiitiin Madda Walaabuu qorannoowwan faayidaa hawaasaa mirkaneessanirratti hojjechaa jira
Yunivarsiitiin Madda Walaabuu qorannoowwan faayidaa hawaasaa mirkaneessanirratti hojjechaa jira Featured
Yunvarsiitin Madda Walaabuu pirojektota hojiilee hawaasummaa 90 ol hojjechaa jiraachuu beeksise.
Pirezidaantii Ittaanaan yunivarsiitichaa Doktar Simeenah Beesee akka jedhanitti, hojiilee qorannoofi qo’annoo tajaajila hawaasummaafi ce’umsa teknooloojii mirkaneessaniifi hawaasaa fayyadan hojjechaa jira.
Qorannoowwan gaggeeffamaniin misooma qonnaa, fayyaa, qabeenya uumamaafi dameewwan biroo 8 irratti hojjechaa jiraachuusaanii ibsaniiru. Hojii kanafis birrii mil. 10 ramaduun hojjechaa kan jiru yemmuu ta’u, barattoonniifi barsiisonni 200 caalanis hirmaachaa jiruu jedhaniiru. Wiirtuuwwan qorannoo Baalee Roobee, Madda Walaabuufi Gindhiiritti hundeessuun hojiiwwan qorannoo fayyadamummaa hawaasa naannichaa tumsanirratti hojjechaa akka jirus himaniiru.
Yunivarsiitin Madda Walaabuu bara 1999 erga hundaa’ee kaasee qorannoowwan faayidaa hawaasummaarratti xiyyeeffatan 230 ol kan gaggeesse yoo ta’u, milkaa’uus danda’eera jechuun 'FBCn' gabaaseera.
Torban kana/This_Week 11230
Torban darbe/This_Month 97587
Guyyaa mara/All_Days 1436010